नाक असाध्यै चिल्लो र सेतो खिल आएर हैरान हुनुहुन्छ ? आउन नदिन अपनाउनुहोस् यी उपाय – Post Patrika
२ जना नेपाली युवाको भारतमा दु:खद नि’धन
भर्खरै हेर्नुहोस को’रोना अस्प’तालमा भयो भिषण आगो लागि,२३ जनाको जलेर ज्यान गयो,भयो भागाभाग !
भ्वाइसबाट आउट भएकी सन्जु मोक्तान, पढाईमा सधै पहिलो, फिल्ममा समेत अफर,
कोरोना ह्वात्तै बढेका बेला काठमाडौंमा अनौठो घट’ना, प्रहरी यसरि सफल भयो प’क्राउ गर्न !
मुख्य पृष्ठ /Intresting/नाक असाध्यै चिल्लो र सेतो खिल आएर हैरान हुनुहुन्छ ? आउन नदिन अपनाउनुहोस् यी उपाय
खिलबारे भ्रम हाम्रो समाजमा नाकमा आउने चिल्लो वा खिल बारे धेरै भ्रम छ । सानोमा बढी चिल्लो खायो वा लायो भने यस्तो हुन्छ, यसलाई निचोरेरै हटाउन सकिन्छ, भन्ने भ्रम मात्र हो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
मेवाको फूलबाट हुन्छ यस्ता फाइदा, जान्नुहाेस्